Lapho mina ufake HD kwenkundla ezifana KLAX, kubukeka esabekayo
Umbuzo Lapho mina ufake HD kwenkundla ezifana KLAX, kubukeka esabekayo
iminyaka 2 6 izinyanga ezedlule #595 by svanarsdel
Lapho mina ufake kwenkundla photoreal kubukeka yokubi okuzenzakalelayo. Ngenzani okungalungile.
iminyaka 2 6 izinyanga ezedlule #605 by archangelmj12
Kukhona izizathu ezimbalwa zalesi siphumo. Okokuqala yikhwalithi yehluzo, nohlobo. Okwesibili, ikhompyutha ye-youre kufanele ukwazi ukusingatha umthwalo wehluzo kanye nezinye izinsiza zokunciphisa. Njengoba kufanele wazi ukuthi i-MSFS yinkimbinkimbi yamandla kakhulu eyakhelwe i-flight, futhi nakuba uhlelo lokuqala lwalungu-dunk, iqiniso lokuthi uBill Gates wavula amalungelo ohlelweni ku-2007 kunoma ubani okhethile ukukhetha. Ngisho ngaphandle kwe-STEAM ngamakhulu ezinkulungwane zokulandwayo unamandla okudala imvelo yakho yonke. Ukukhuluma iqiniso, kukhona abadali abaningi abangaphansi kweminyaka engu-20 kulolu hlelo futhi iqiniso lihle kakhulu futhi nemibono engcono yalokho okushayela indiza, ngaphezu kwalokho i-ACE iqembu elikhulu elihilelekile ohlelweni lwe-MSFS. Manje uma ufuna okuthile okuzokugcina iminyaka yokuzama ukuqonda uhlelo futhi ukuyenza isebenze kahle, kunemikhiqizo emibili oyodinga. Okokuqala yi-fs tweak ye-fps. Leli thuluzi eliyingqayizivele kakhulu futhi eliphawulekayo, elilula ukusebenzisa futhi lizokufundisa lokho ongasazi nokuthi ungayiqonda kanjani uhlelo. Owesibili yi-FSPS XTREME. Lokhu kuzodonsa amasokisi akho. Isebenzisa i-laptop ye-500 ye-7 yonyaka wokuqala nge-Toshiba.intel eyinhloko i5.i inezindiza ze-3850, izinhlobo ze-459 zengeze kanye nezindiza ze-45000 ezingaphezu kwezinhlelo ze-truelife, futhi ezingenayo i-glitch. kuthathwe cishe eminyakeni eyishumi kulo nyaka ukuze uthole lokhu kude nakwekhompiyutha ye-5 futhi mayelana nokubuyisela kabusha kwe-15 nokukhipha ukukhishwa kwamakhredithi amnyama, futhi empeleni nginekhophi yeskripthi sohlelo kusuka kwi-microsoft. Ngifunde ku-2007 kusuka ku-Microsoft ukuthi kuzoba nemiphumela eminingi yamaphutha kanye neziphambeko, kodwa nanamuhla nemiphakathi izosinda kulokho esithathile uhlelo oluphakeme ukuya phezulu. Ngithemba ukuthi lokhu kuye kwasiza, noma yimiphi imibuzo, shiya umlayezo lapha futhi ugula ukubuyela kuwe. Imisebenzi eminingi yezohwebo, futhi ngokuhamba kwesikhathi uzofunda. Ngaphandle kwakho, indawo yakho engcono kakhulu lapha, ngakho ukwenza kwakho kuhle. Izinkinga nge-ai? noma yini, ake ngazi. Ngiyi-MSFS yangaphambili. Uma ngingakutholi ngizothola.
iminyaka 2 5 izinyanga ezedlule #613 by rikoooo
Siyabonga i-archangelmj12 ngempendulo yakho enkulu.
svanarsdel, singathanda kakhulu ukusiza uma ungasithumela ezinye izikrini, ngakho-ke singakutshela ukuthi yini engalungile.